MADAXWEYNE XASAN oo laga faafiyey sawir dood badan dhaliyey (Arag) - Caasimada Online
Home Warar MADAXWEYNE XASAN oo laga faafiyey sawir dood badan dhaliyey (Arag)
MADAXWEYNE XASAN oo laga faafiyey sawir dood badan dhaliyey (Arag)
Muqdisho (Caasimada Online) – Baraha Internet-ka ee Soomaalida iyo kuwa bulshada ee facebook iyo twitter, ayaa lagu faafiyey sawir laga qaaday madaxweyne Xasan Sheekh iyo waftigii la socday, intii ay la kulmayeen madaxda waddanka Japan, oo ay booqdeen.
Sawirka, ayaa waxaa ka muuqda laba saf, oo saf ay kasoo jeedaa waftiga Soomaalida iyo safka kale, oo ah waftiga dowladda Japan.
Arrinta xiisaha leh ee sheekooyinka badan dhalisay, ayaa ah in waftiga dowladda Somalia ay gacmo maran yihiin, halkan kuwa Japan ay wataan warqado iyo qalimaan.
Fikradi kala duwan, ayaa laga bixiyey sawirka. Dadka qaar waxa ay ku macneeyeen in waftiga Japan ay ahaayeen dad ajendayaal wata una diyaarsan inay qortaan waxa ay ku wada hadlayaan labada dhinaca, halka kuwa Soomaalida ay u muuqdaan dad soo sheeko tagay.
Dad kale, ayaa Iyana qaba fikir kaa duwan, oo u arka inay taasi wax aan macno badan sameyneyn ay tahay, loona baahan yahay inaan la buun buunin.
Si kastaba, bal aqrsite sawirka hoose ka arag kadibna fikirkaaga ka dhiibo qeybo ra’yiga. Mahadsanid.